पाकिस्तानका यी व्यक्ति सिंहसँगै सुत्छन्, हरेक महिना दुई लाख खर्च
- जेठ १५, २०७६, बुधबार, काठमाडौं
कुकुर बिरालोलाई घरमा राख्नु साधारण कुरा हो तर पाकिस्तानको मुल्तानमा बस्ने जुल्केफ (३३) ले सिंहलाई घरमा पालेर राखेका छन् । उनी दैनिक उक्त सिंहसँग मर्निङ वाकमा निस्कन्छन् र राती सँगै सुत्छन् । जुल्फेकले सिंहको नाम बब्बर राखेका छन् । बब्बरका कारण जुल्केफको परिवारलाई कुनै समस्या नभएको उनी बताउँछन् । उनका...
सेल्फीका लागि गोरिल्लाले ‘पोज’ दिएपछि फोटो भयो भाइरल
- बैशाख १०, २०७६, मंगलबार, काठमाडौं
हालै एक व्यक्तिको दुई गोरिल्लासँगको सेल्फी निकै भाइरल भइरहेको छ । भाइरल हुनुको कारण भने दुई गोरिल्ला रहेका छन् जसले फोटो खिच्ने बेला मानवले झैं ‘पोज’ दिइरहेका छन् । डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोको भिरुङ्गा नेशनल पार्कका कर्मचारीले उक्त फोटो खिचेर फेसबुकमा राखेका थिए जुन हेर्दाहेर्दा भाइरल भयो । ‘अफिसमा अर्को...
नेपालमै यस्तो, अब अनलाइन बाटै विवाह हुने
- माघ २६, २०७५, शनिबार, काठमाडौं
के तपाईं वर वा बधूको खोजीमा हुनुहुन्छ ? यदि तपाईं विवाह गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ ? आमाबुबाले मागी विवाहको प्रबन्ध गरिदिनु भएको छैन भने अब अनलाइन पोर्टलमार्फत वरबधु खोज्न सक्नु हुनेछ। तपाईं कतै वर,बधुको खोजीमा त हुनुहुन्न ?यदि हुनुहुन्छ भने तपाईंका लागि नयाँ आफर आएको छ । अब तपाईंले अनलाइन बाटै...
आफ्ना श्रीमानसँग डिभोर्स गरेर दुई महिलाले गरे समलिंगी विवाह
- पुष २२, २०७५, आइतबार, काठमाडौं
भारतमा आफ्ना श्रीमानसँग डिभोर्स गरेर दुई महिलाले समलिंगी विवाह गरेका छन् । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित हमीरपुर जिल्लाका २६ वर्षीया र २१ वर्षीया ति दुई महिलाले श्रीमानसँगको सम्बन्धलाई टुक्राएर समलिंगी विवाह गरेका हुन् । भारतीय मिडियाका अनुसार दुईमध्ये एक महिला नानीकी आमासेमत हुन् । उनीहरु विगत ७ महिनादेखि प्रेममा थिए ।...
जहाँ गोरो बच्चा जन्मिँदा मृत्युदण्ड दिइन्छ
- पुष १२, २०७५, बिहिबार, काठमाडौं
हाम्रो समाजमा अधिकांशले गोरो छालालाई सुन्दरताको प्रतीक मान्दछन् । तर भारतको एउटा टापुमा त्यस्तो छैन । जहाँ बच्चा जति कालो भयो उति नै राम्रो मानिन्छ । जब बच्चा गोरो जन्मिन्छ, त्यस्तो बच्चालाई मृत्युदण्ड दिइन्छ । अण्डमान टापुमा बस्ने एउटा जनजाति समुदायमा यस्तो प्रचलन रहेको छ । जन्मिने बच्चा कालो नै...
अनुहारबाटै पत्ता लाग्ने १० रोगहरु
- बैशाख १५, २०७५, एजेन्सी
अधिकांश रोगहरु कुनै न कुनै संकेतबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्तै केहि स्वास्थ्य समस्या छन्, जुन अनुहारबाटै थाहा पाउन सकिन्छ । १. यदि तपाइको अनुहारमा मौनता छाएको छ भने थाहा पाउनुस् कि किड्नीमा कुनै न कुनै समस्या छ । यस्तो समस्या औषधिको साइड इफेक्टको कारण पनि हुन सक्छ । २....
अस्पताको अर्बौं मूल्यको जग्गा नै गायब
- चैत्र २९, २०७४, बिहिबार, भक्तपुर
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वको भक्तपुर दुवाकोटमा रहेको ५० रोपनी जग्गा गायब भएको छ । आजको राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा समाचार छापिएको विस्तारित सेवा दिने परियोजनासहित सरकारले दुई वर्षअघि प्रतिष्ठानलाई दिएको ५७० रोपनी जग्गामध्ये भौतक पूर्वाधार निर्माण गर्दा ५० रोपनी जग्गा हराएको तथ्य खुलेको हो । १५ सय शय्याको अस्पतालसहित चारवटा...
विद्या आर्जन गर्न यी नियम पालना गर्नुहोस् ।
- चैत्र १२, २०७४, सोमबार, इटहरी
१ तत्पर्ता २ परिपक्वता ३ व्यवस्थित हुनुहोस् ४ एकैपटक धेरै काममा हात नहाल्नुहोस्– ५ समय मिलाउनुहोस ६ सुत्नुहोस ७ योजना बनाउनुहोस् ८ नोट गर्नुहोस् ९ अध्ययन गर्नुहोस् १० स्थान रोज्नुहोस् ११ अध्ययन समूह बनाउनुहोस्– १२ प्रश्न सोध्नुहोस्–
- चैत्र ९, २०७४, काठमाडौं
जव कुनै पनि केटी पुरुषसँगको सम्बन्धमा आउँछे उसमा बदलाव आउँछ । हुन त केटीलाई बुझ्न कसैले पनि सक्दैन पनि भनिन्छ तर कसैकै गर्लफ्रेण्ड बनेपछि केटीहरुमा बदलाव आउँछ । उनीहरुमा आएको बदलाव बुझ्न त्यति कठिन हुँदैन । यस्ता बदलाव कुनै चिजसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् । अचानक मुड परिवर्तन हुने, स्वभाव बदलिनु...